Faa’iidooyinka Daacadnimadu U Leedahay Guurka Iyo Caafimaadka
Home»XIRIIRKA IYO GUURKA»Faa’iidooyinka Daacadnimadu U Leedahay Guurka Iyo Caafimaadka
Aayaha editor Send an email January 25, 2021
Faa’iidooyin badan oo lama filaan ayaa ku jiraan inaad daacad isku noqotaan lamaane ahaan.
Waa kuwan sababaha ugu waaweyn ee kalsoonidu ay aad muhiim ugu tahay.
1. Daacadnimadu waxay dhistaa is-aaminaada
Haddii aadan kalsooni ku qabin xiriirkaaga, waxba ma heysid. Marka adiga iyo xaaskaaga / saygaaga aad daacad isku tihiin midba midka kale, uma baahnid in aad mar labaad fekerto.
Miyaad dareentaa kalsooni iyo inaysan waxba jirin marka lamaanahaagu kusoo waco kuuna sheego inuu xafiiska ku daahay oo uu shaqo haayo?
Kawaran hadaad safar shaqo u raacdo qof kula shaqeeya? Miyuu saygaaga / xaaskaaga aammini lahayd in safarkaagu sharci yahay? Dhinaca kale, miyaad ku kalsoon tahay in qofkaagu daacad kuu ahaan doono intaad magaalada ka maqantahay? Haddii jawaabaha su’aalahan ay yihiin kuwo aan caddeyn oo shaki uu ku jiro, xiriirkiina dhibaatooyin ayuu yeelan karaa.
Arimaha aaminaada ayaa burburin kara xiriirkaaga. Waxaad u baahan tahay inaad ogaato in qofka aad qalbigaaga ku aamintay uu had iyo jeer daacad kuu ahaan doono. Sidoo kale, way ku caawineysa haddii aad kalsooni ku abuurto qofkaas. Xiriir daacad ah ayaa labadiinaba idinka xoreeya shakiga, masayrka, iyo malada joogtada ah.
2. Walaaca ayay yareysaa
Sideed dareemi laheyd hadii adiga iyo lammaanahaada daacad uusan midkiinba midka kale u ahayn? Culeyska welwelka ee si joogto ah u daboolaya raadadkaaga ayaa noqon kara mid waxyeello geysta. Waxay u badan tahay inaadan ku jiri doonin dareen jacayl marka labadiinuba aad walaacsantihiin.
Ma ogtahay in walbahaarka iyo fekerka uu saameyn weyn ku yeelan karo caafimaadkaaga jireed iyo maskaxeed? Maqaal uu daabacay Machadka Qaranka ee Caafimaadka Maskaxda Mareykanka, ayaa ka digaya in walbahaarka daba dheeraada uu horseedi karo dhibaatooyin wadnaha, dhiig kar, sonkorowga, istaroogga, iyo kansarrada qaarkood. Waxay sidoo kale gacan ka geysan kartaa geeri lama filaan ah.
Dadka daacadda ahi sidoo kale waxay bartaan sida walaaca looga ilaaliyo lamaanahooda. Goorma ayay ahayd markii ugu dambeysay ee aad wada qaadataan waqti dheer si aad u nasataan? Sidoo kale, u tixgeli duugista iyo nolosha jacaylka caafimaadka leh inay yihiin habab hoos loogu dhigayo heerarka walaacaaga.
3. Daacadnimada waxay hagaajisa caafimaadkaaga
Maaddaama daacad-darrida xiriirka ay waxyeello u geysan karto caafimaadkaaga, waxay u taagan tahay sabab in daacadnimadu ay hagaajiso caafimaadka. Cilmi-baaris ay daabaceen Ururka Cilmu-nafsiga Mareykanka ayaa lagu ogaaday in dadka runta sheegaa ay arkeen koror caafimaad oo weyn. Waxaa yaraada walwalkooda, niyadjabkooda, iyo xanuunada jireed.
Dabcan, daacadnimadu kor uma qaadi doonto caafimaadkaaga haddii adiga iyo lammaanahaagu aydaan is daryeelin. Daacad ahaanshuhu sidoo kale waxaa ka mid ah ogaanshaha inaad u baahan tahay inaad ku dhaqanto qaab nololeed caafimaad leh. Cunto habboon, jimicsi, iyo nadaafad ayaa gacan weyn ka geysan kara in adiga iyo lamaanahaaga aad ku noolaataan nolol caafimaad iyo farxad leh.
4. Daacadnimadu waxay dhistaa kalsoonidaada
Aynu wajahno, been sheegida iyo qarinta sirta waxyeelada leh waxay yar yareeyaan kalsoonidaada. Lamaanahaaga ayaa laga yaabaa inuusan ku ogaan, laakiin waxaad murugo ka dareemi doontaa gudaha. Markaadan haysan xasillooni gudaha ah waxay aakhirka ka muuqan doontaa banaanka.
Dadka daacadda ah badanaa waxay dareemaan kalsooni xoogan markay ogaadaan inaysan heyn wax ay qarinayaan. Lammaanahaagu wuxuu kugu aaminay qalbigiisa iyo noloshiisa, adiguna waxaad kula kacday qiyaano bal kawaran xanuunka ay leedahay arintaan oo laga yaabo inaad dareemeyso islamarkaana aad ka qoomameyneyso?.
Sidoo kale, isku kalsoonaanta iyo daacadnimada ayaa keenta in dadka kale ay kugu kalsoonaadaan oo ay ku aaminaan.
Talooyin kaa caawinaya inaad lamaane daacad ah u noqoto guurka
Haweenka Leh Tilmaamahaan Waa Riyada Nin Kasta
UGAAR AH RAGGA: Xaas Wanaagsan Ayaad Heshay Haddii Gabadha Ay Leedahay Sifooyinkaan
3 Sabab oo kugu qasbaya inaad iska iloowdo nin ama naag aanan fariimaha kaaga soo jawaabin
How you should clean your smartphone
3 reasons why you should drink water first thing in the morning
Three ways on how to choose the right girlfriend
Five ways to make your lady feel special everyday
5 Nooc Oo Haweenka Kamida Oo Ay Tahay Inaad Ka Fogaatid Markii Aadan Lacag Heysan
Waxyaabaha Ay Haweeneydu Maskaxda Ku Heyso Markay Ogolaato Inay Xaaskaaga Noqoto